कुटपीट गर्ने वडा अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता
Milan Ghimire calendar_today ९ साउन २०७६, 1:01 pm
चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष अजय लुईटेलविरुद्ध सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगामा लुइटेल विरुद्ध छिमेकी वडाका वडा अध्यक्षमाथि कुटपीट गरेको, कर्मचारीलाई नाक भाच्ने धम्की दिएको लगायतको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
सोही गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष सुरेश थापाले गाउँपालिकाको कार्यालयमै ०७६ असार ३० गते दिउँसो आफुमाथि कुटपीट गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगामा साउन १ गते लुईटेल विरुद्ध उजुरी दिनुभएको थियो । घटनाका प्रत्यक्षदर्शी खड्ग कार्कीका अनुसार थापामाथि गाउँपालिकामा काम गरिरहेको अवस्थामा दिउँसो ३ बजे मादक पदार्थ सेवन गरेर लुइटेलले ककुटपीट गरेका थिए । कार्कीले आफुले थापालाई जोगाएको पनि बताउनुभएको छ ।
उजुरी लिएपछि प्रहरीले आरोपित वडा अध्यक्ष लुइटेललाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । प्रहरीले एक हप्ता कुर्दा पनि लुइटेल नआएपछि मुद्दा दर्ता गरेको हो । लुइटेलको अध्यक्ष थापामाथि कुटपीट गरेको, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम भगत र सुब्बा ईश्वर ढुंगानालाई समेत कुटपीट गर्ने धम्की दिएको अडियो रेर्कड पनि प्रहरीलाई बुझाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका डिएस्पी पुष्पराज मल्लले उजुरी मुद्दाका रपमा दर्ता भएकाले अब कानुनी प्रकृयामा अघि बढ्ने बताउनुभयो ।